Waxa amar la siiyay in ay hagaajiyaan jamacadaha gaarka loo leeyahay shahadooyinka aan aqoonsiga lagu siinin ee ay bixiyaan – ዜና ከምንጩ
Jamacadaha gaarka loo leeyahay ee shahaadooyinka aan aqoonsiga lagu siinin siiyay ardaydii ka qalin jabisay halkaasi ayaa waxa amar siisa wakalada wxbarashada heer sare iyo qiimaynta tayada si ay u soo hagaajiyaan shahadooyinka ay bixiyeen.
Wakalada waxbarashada sare iyo qiimaynta tayada oo u warntay wargayska addis maleda ayaa sheegtay in machadyada wax barashada heerka sare oon la siinin aqoonsiga heerk shahaadooyinka qaar ayaa siiya ardayda tasina waxa ay ardayda ku noqotay in la meermeeriyo,sidaas darted wakaaladu waxa ay uga digaysa machdyada waxbarashada heerka sare in ay iska soo hagaajiyaan ooy shahadooyinka loo ogolyahay kaliya bixiyaan ardaydaasi dhiban na laga ilaaliyo dhibka.
Sida ay sheegtay wakaaladu ardayda u imanaya in ay shahadooynkood soo xaqiijiya wakaalada ayaa waxnu ku aragnay shahadooyinkooda qaar in ay yihiin qaar aan loo ogolayn inay bixiyaan machadyadaasi, sidaas darted shahaadooyinka ay halkaasi la yimaadan aanay qiimo lahayn.Tarekeny Geresu oo ah madaxa xidhiidhka dad waynaha ee wakaladaasi ayaa sheegay in ardaydaasi ay ku dhibtoodaan shahadoyinkaasi aan aqoonsiga lahayn oo hadana ku kalifan in kharash kale u ka baxo.
Tusaale ahaan ardayda dibadaha waxbarasho u tagaya marka ay wakalda u yimaadan si loogu xaqiijiyo shadooyinkooda in ay yihiin kuwo jaamacado aqoonsi leh iyo in kale.marka loo sheego ardayda shahadooyinka ay wataan in aanay ahayn kuwo aqoonsi lagu siiyay jamacadaha ay wax ka barteen waxa ka soo gaadha ardaydaasi dhibaatooyin.
waxa ay wakaaladu sheegtay shahadooyinka aanay aqoonsiga siinin wakalada waxbarashada heerka sare iyo xaqiijinta wax faaido oo ay yeelanayaan ma jirto sidoo kale ma noqonayaan qaar sharciyeeysan.
Tarekeny oo hadalkiisi sii wata ayaa yidhi in kasta oo sadex sano ka hor ay wakaaladu dabogalki ay ku samaynaysay machadyada waxbarashada heer sare ay ka yara gaabisay xiligaasina ay ka faiidaysteen oo ay jaamacadaha qaar aqoonsiyo aan la siinin ay ka xayaysiinayeen baraha bulshada iyo idaacadaha,imika lakiin waxa lagu jiraa hawl sidii jaamacdahan loogu soo celin laha nidaam sharciyaysan, sidaas darted imaka waxa jira isbadalo fiican inkasta oo ay jiraan qaar wali aan la xalinin dhibaatooyinkoodi.
Waxa ay wakaaladu sheegtay in ilaa iyo hada jaamacadaha aqoonsiga leh ay yihiin shan kuwaas oo ah jamacada yunity, jaamacada kidhist mariyaam,jaamacada rift vally,jaamacada haraambe iyo jaamacada admaas.sda oo kale jaamacadaha la siiyay aqoonsiga unvesity coliage ayaa iyaguna ah shan waxana ay kala yihiin alfa unversty college, new genereation unversty cooleg sheeba university college, hop university college iyo gaaje unveristy.
Waxa la sheegay in jaamacadaha aan aqoonsiga la siinin ay isticmaalaan magac aanay lahayn ooy ka xayaysiiyaan idaacadaha,internetka iyo in ay boodhadh ku qortaan ooy meelo kala duwan ku nabaan in ay mamnuuc tahay.
Sida oo kale waa in jaamacauhu ay hagaajiyaan shahaadooyiki ann aqoonsig lahay ee ay ardayda siyeen ,ardayda soo socota ee qalin jabinaysana ay siiyaan shahaadooyin la aqoonsanyahay sidaasina ay ka soo baxaan kaalintooda sharciga.
Ardaydana waxa looga baahanyahay baa la yidhi in ay soo celiyaan shahaadooyinki hada ka hor la siiyay ee aan aqoonsiga lahayn. Sida oo kala waxa looga baahan yahay ardayda in shahaadooyinka la siinayo ardayda qalin jabinaysa in ay iska hubiyaan in ay yihiin kuwo la aqoonsanyahay iyo in kale.
Total views : 6422335